Taariikh Waliba Haraageed Iyo Dhacdo Walba Xasuusteed .. Afar Jeer Oo La Isku Dayey In La Faago Qabriga Rasuulka
Ninkaas waxaa qaar ka mid dadkii ku dhawaa kula taliyeen inuu Madiina kasoo raro qabriga Nabiga, islamarkaana geeyo dalka Masar, si markaas Muslimiinta aduunka oo dhan Masar u Aadaan, arrintaasna wey la fiicnaatay Mansuur Bin Nazaar.
Ru’yadii uu 3-da jeer arkay ayuu uga sheegeeyey, markaas ayaa Jamaamuldiin Al-muusili yiri “Fadhi kuuma yaalo ee aad magaalada Madiina Al-munawara, hana ka sheekeyn arrinta aad aragtay”, Suldaan Nuuradiin Zanki iyo wasiir Jamaaludiin ayaa isu raacay Madiina
Dhamaan dadkii sadaqada qaadanaya ayay wajiyadooda eegayeen, dadkii sadaqada la siinayey ayaa dhamaaday, mana lagu arkin qof leh tilmaamihii la raadinayey, markaas ayaa reer Madiina la weydiiyey dad kale miyaa harsan?, waxey ku jawaabeen ‘Maya’, markaas ayaa Suldaanka iyo wasiirkiisu ku yiraahdeen “Bal fekera oo fiirsada”,.
Markaas ayaa Nuuradiin Zanki wuxuu yiri labadaas nin ha la ii keeno, markii loo keenay ayuu weydiiyey xagee ka timaadeen?, waxey ku jawaabeen “Marooko ayaan ka nimid, waxaan u nimid xaj, waxaana kadib dooranay inaan deris la noqono goobtaan barakeysan ee uu ku yaallo qabriga Nabiga.
Suldaan Nuuradiin Zanki ayaa ku yiri “Runta ii sheega”, waxey ku adkeysteen warkoodii hore, wuxuuna ku yiri "I tusa gurigiina", waxey geeyeen gurigooda oo ku dhow qabriga Nabiga, wuxuu suldaanku ku wareegay guriga, wuxuuna meel ka qaaday gogol taallay, markaas ayuu arkay god loo qoday jihada qabriga Nabiga, arrintaas ayaan dadkii la argagxeen.
Suldaan Nuuradiin Zanki ayaa markaas nimankii weydiiyey "Runta ii sheega" kadib markii la garaacay, waxeyna sheegeen iney yihiin Kiristaan, uuna soo diray nin gaal ah, kaasoo lacago badan ku siiyey sidii ay u xadi lahaayeen jasadka Nabiga Sallallaahu Caleyhi Wasalllama.
Labadan nin ee nasaaradaha oo markii ay tegayaan Madiina soo raacay dadka ka soo xajiyey galbeedka Carabta ayaa dadka Madiina ku arki jireen cibaado badan oo isugu jirta salaad iyo sadaqo, hase ahaatee dan kale ayay ka lahaayeen, waxaana Suldaan Nuuradiin Zanki amaray in labadooda qoorta lagu dhufto.
Markaas Salaaxudiin Al-ayuubi oo ku sugaan Maka ayaa arrinta maqlay, wuxuuna aaday halkii uu ka soo socday Arnad, halkaas ayuuna ku dilay, sida uu weriyey dhulmareenka Ibunu Jubeyr Abul-xuseyn. Wuxuuna qisadan ku qoray Socdaalkiisii 578 Hijriya.
Ciidamadan Kiristanka ah oo intii ay u sii socdeen Madiina dilay dad badan, isla markaana boobay hantai badan ayaa la jebiyey iyagoo ku dhow Madiina oo uu uga dhinaa hal maalin socod, waxaana jebintood qayb ka qaatay ciidamo ka yimid Masar.
Intaas oo isku day fashil ayay ku dhmaadeen, Alle ayaana Nabiga Sallallahu Caleyhi Wasallama dadka ka ilaalinaya, ee waxaa la gudboon qolada qorshahaan zamankaan wadata u ka mid yahay Trump ha ogaadaan in qorshahaas horay u fashalmay, hana ku cibrad qaataan kuwi saas u fakaray wixii ku dhacay